မင်္ဂလာပွဲမှာ သမီးဖြစ်သူကို သူဖုန်းလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင် ရမှ ကျေနပ်နေတဲ့ ဖေဖေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေပုံကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ အမွန်း – Cele Snap
သီချင်းဆိုကောင်းရုံသာမက အသားအရည်ညိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ လှတဲ့ အမွန်းဟာ နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်တွေတောင် အရှုံးပေးရလောက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အမွန်းက သူမရဲ့ အတွင်းရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသလို သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့တဲ့ အမွန်းက အခုဆိုရင် သူမရဲ့ ကြင်စဦးအိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမယ့် ချစ်ရတဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာလည်း တာဝန်မပျက်တဲ့ အမွန်းက ဒီကနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ ဖေဖေ့အကြောင်းကို ပြောလာပါတယ်။ အမွန်းက သူမရဲ့ လက်ထပ်ပွဲနေ့က အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုချပြရင်း “မင်္ဂလာပွဲမှာ ဘုရားကျောင်းလျှောက်လမ်းမှာ တွဲလျှောက်ပေးတဲ့ ဖေဖေ့ကြောင့် အရမ်းကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ သမီးအဖေ့ကို အရမ်းချစ်ပြီး အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ် Ah Wa! Professional ဓါတ်ပုံဆရာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောလဲ သူ့ဖုန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရမှကျေနပ်တဲ့ဖေဖေပါ ! 😁👨‍👧💙” ဆိုပြီး အမှတ်တရ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမွန်းကတော့ သူမကို အရမ်းချစ်သလို သူမကလည်း အရမ်းချစ်ရတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ချစ်သူကို ရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမွန်းတစ်ယောက် ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းအပြင် ဖေဖေ၊ မေမေ မိသားစုတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Ah Moon ‘s fb
သီခငျြးဆိုကောငျးရုံသာမက အသားအရညျညိုစိမျ့စိမျ့လေးနဲ့ လှတဲ့ အမှနျးဟာ နိုငျငံခွားမျောဒယျတှတေောငျ အရှုံးပေးရလောကျတဲ့ ကိုယျပိုငျစတိုငျလျရှိသူတဈယောကျပါ။ အမှနျးက သူမရဲ့ အတှငျးရေးနဲ့ ပကျသတျပွီး လြှို့ဝှကျဖုံးကှယျထားခွငျးမရှိသလို သူမရဲ့ အိမျထောငျရေးနဲ့ ပကျသတျပွီးလညျး ပရိသတျတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ခပြွထားသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလအတှငျးမှာ ခဈြသူနဲ့ လကျထပျလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို အသိပေးခဲ့တဲ့ အမှနျးက အခုဆိုရငျ သူမရဲ့ ကွငျစဦးအိမျထောငျသညျဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိမျထောငျရှငျမတဈယောကျဖွဈသှားပွီဆိုပမေယျ့ ခဈြရတဲ့မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှအေပျေါမှာလညျး တာဝနျမပကျြတဲ့ အမှနျးက ဒီကနမှေ့ာတော့ သူမရဲ့ ဖဖေအေ့ကွောငျးကို ပွောလာပါတယျ။ အမှနျးက သူမရဲ့ လကျထပျပှဲနကေ့ အမှတျတရဓာတျပုံလေးတှကေိုခပြွရငျး “မင်ျဂလာပှဲမှာ ဘုရားကြောငျးလြှောကျလမျးမှာ တှဲလြှောကျပေးတဲ့ ဖဖေကွေ့ောငျ့ အရမျးကို ကနြေပျပီတိဖွဈရပါတယျ။ သမီးအဖကေို့ အရမျးခဈြပွီး အမွဲတမျးကြေးဇူးတငျနပေါတယျ Ah Wa! Professional ဓါတျပုံဆရာတှရှေိပါတယျလို့ပွောလဲ သူ့ဖုနျးနဲ့ကိုယျတိုငျကိုယျကရြိုကျပွီး မှတျတမျးတငျရမှကနြေပျတဲ့ဖဖေပေါ ! 😁👨‍👧💙” ဆိုပွီး အမှတျတရ ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမှနျးကတော့ သူမကို အရမျးခဈြသလို သူမကလညျး အရမျးခဈြရတဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျောခဈြသူကို ရှာတှသှေ့ားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမှနျးတဈယောကျ ခဈြရတဲ့ ခငျပှနျးအပွငျ ဖဖေေ၊ မမေေ မိသားစုတှနေဲ့ အမွဲတမျး ပြျောရှငျတဲ့ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
နှစ်သစ်မှာ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ဆုတောင်းစကားကို အယောင်ယောင်အမှားမှား ပြောနေတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး